Monday October 26, 2015 - 01:28:01 in Wararka by Web Admin
Xuskaas oo aalaab sanad kasta xilligaan oo kale laga dhigo daafaha caalamka Ayaa lagu soo bandhigaa qur'aan aqris isugu jiro qadmooyin 114-ta Qur'aan Kariimka ah iyo Subacyo Qur'aanka Kariimka ah iyadoo ay usii dheertay salawaadka Xabiibka Suuban CSW iyo tawasulaatka mashaa'ikhda.
Ugu dambeysna waxaa lagu soo qatimaa Siyaaraadka Mashaa'ikhda banaanbaxyo digri ah oo xelqooyin kala duwan oo katirsan duruuqu Suufiyah ee Ahlusunna Waljameeca.
Gaba-gabada Xuska Mashaa'ikhda ayaa Culamaa'udiinka Siyaarada kasoo qeybgalay ay xaadiriinta Siyaarada ku baraarujiyaan muxaadarooyin ku'aadan Ijtimaacaadka nuucaan oo kale ah faa'iidada uu leeyahay iyo waxa laga dhaxlo waxeyna ugu dambeys xaadiriinta siyaarada faraan in lala yimaadk Rabbi Kacabsi si dariiqa toosan ay dadka u wajahaan oo ay aakhiro ugu bad baadaan waxaana duco kusoo qatimo Ahlubeytka Kasoo qeybgala Siyaaraadka Mashaa'ikhda ayagoo xaadiriinta siyaarada dambi dhaaf ugu duceeya .
Xuska Mashaa'ikhda qeybta Nairobi sidaas ayey kusoo gaba gabowday waxaana idiin leenahay hadaa nahay Jameecada reer Sh Cabdi Celi oo isku duuban siyaarada Maqbuula Allaah kayeelo meelaha ay kasocota Allaah saqiro howlaha kulli dhinac walbana Maqbuula Allaah kayeelo Sanadaan Sandeeda Samo Iyo Siyaado Allaah Nagu Gaarsiiyo.
W-D; Asayid Cali Sheekh Axmed Yare